UMHLA WOKUKHUTSHWA KWE-DRAGON PRINCE YE-4 KWAYE KUFANELEKILE UKULINDA? - ANIME
Umhla wokukhutshwa kwe-Dragon Prince ye-4 kwaye kufanelekile ukulinda?
INkosana iNkosana yintsomi yaseMelika yoosasazo ababodwa. UAaron Ehasz uyiphuhlisa noJustin Richmond, ethi iBardel Entertainment
INkosana iNkosana yintsomi yaseMelika yoosasazo ababodwa. UAaron Ehasz uyiphuhlisa noJustin Richmond, eveliswa yiBardel Entertainment. Amaziko alandelayo abonisa malunga nabantakwabo abasebukhosini uCallum no-Ezran ecaleni kuka-elf Rayla, ekufuneka esombulule imfazwe phakathi kwezizwe zabantu kunye nezinto eziyimfihlakalo ezihlala kwilizwe laseXadia ngelixa bejonge inkosana yenamba engu-Azymondias.
INkosana iNkosana yeza ngokukhawuleza kwaye inomsindo kumaxesha ayo okuqala amathathu. Abenzi beAvatar: IAirbender yokugqibela iphuhlise la manqaku oopopayi weNetflix adlala iziqendu ezingama-27 kwisithuba sonyaka. Ukuba uziva ngathi ulinde umhla wokukhutshwa kweNkqantosi yesi-4 yeXesha, ayinguwe wedwa.
Nguwuphi uMhla wokuKhutshwa kweXesha lesi-4 leNkosana yeDragoni?
Iakhawunti esemthethweni ka-Twitter yeThe Dragon Prince ithe ayizukubhengezwa umhla wokukhutshwa 4 de kube sekupheleni kukaJanuwari 2021. Nangona ezinye iiprojekthi zemultimedia ziye zahlekiswa, asiqinisekanga ukuba icandelo lesine lothotho liza kuqala nini INetflix. Akukho xesha elisemthethweni lokukhutshwa kweNkqantosi yeNkosana isizini ye-4, kodwa inokwenzeka ukuba iqale ukuboniswa ngonyaka we-2021. Ekuqaleni kwalo nyaka, uthotho lwanikezela ngohlaziyo kwinkqubela phambili yesizini kunye nokuba kwakunjani ngexesha lokuqhambuka kwe-COVID-19 eqhubekayo.
Kodwa iComic-Con yalo nyaka kwipaneli yasekhaya evela kubadali uAaron Ehasz noJustin Richmond ibonisa ukuba ingcono kakhulu kunaleyo. Abavelisi baxoxe ngendlela iqela labo elisebenza ngokungakhathali kwaye likhawuleza kumxholo obalaseleyo webali. Dragon Dragon okwangoku ifumaneka kwiNetflix kumaxesha amathathu onyaka. Abaphulaphuli baqala ukulinda ixesha lesine elizayo kwi-2019 emva kwexesha le-3 liphele kwi-cliffhanger. Okulusizi kukuba, kusafuneka silinde iinyanga ezimbalwa kude kubhengezwe umhla osemthethweni.
Ngaba kufanelekile ukulinda?
Njengenxalenye yeXadia kunye nezikumkani zabantu ezintlanu, u-Ezran, uCallum, kunye no-Elf umbulali uRayla bazama ukulungisa ukungabikho kokusesikweni okuninzi kwixesha lesithathu le-The Dragon Prince. Ekugqibeleni, uViren kunye neAaravos abakwazi ukukhupha amandla obomi beZym kwisiqendu sokugqibela, esibizwa ngokufanelekileyo iMfazwe yokugqibela. Ixesha leNkqantosi yesi-3 seNkosana inokubonakala ngathi inika ukuvalwa kunye nokuvalwa njengoko uZubeia, inamba kanina, evusa kwaye ejonge unyana wakhe. Nangona kunjalo, itshintsha yonke into emva kokuba uClaudia etyhile ukuba uViren wabuyiselwa ebomini ngumama wakhe.
Akuqinisekiswanga ukuba iyelenqe liya kubhekisa phi kwiXesha leNkosana yeXesha le-4.Kodwa uhlengahlengiso lwentaphane ye-Aaravos inamahemuhemu okuba yi-anchor yomboniso. Ukuthandana kukaRayla noCallum kunye nokubaluleka kwenqaku likaClaudia (intombi kaViren) konke kuya kuqwalaselwa kwiziqendu ezizayo zeThe Dragon Prince, ngokuka-Ehasz. Abaphulaphuli nabagxeki ngokulinganayo bakaluthathe olu luhlu ngamanqaku aphezulu. Umboniso ulinganiswe i-8.4 / 10 kwi-IMDb. Kukho inani elingenangqondo labalandeli abaye baxhasa lo mboniso ngazo zonke iindlela.
Akunakwenzeka ukuba uphoswe kolu luhlu kwiNetflix. Akukho nto ilunge ngakumbi kunokubukela oopopayi abalungelelaniswe nosaziwayo. Ngokwahlukileyo koko, konke okufumaneka apha bubundlobongela, ungquzulwano, nokungavisisani, ubungqina bokubawa kwabantu. Iinyaniso ezifihliweyo ziya kuvela, kwaye iintshaba ziya kuhlawula.
UWendy Williams waxelwa ukuba ufike esibhedlele ukuze ahlolwe impilo: Iingxelo
UMegan Fox uhamba iminyaka eli-10 yomtshato omde kuMatshini woMatshini kaKelly
Umhla womoya we-DC ka-Aquaman 2? Baddest [Villain], Okulindelweyo, Yonke into ekufuneka uyazi malunga noKumkani ongaphantsi kwamanzi uJason Momoa
I-Peaky Blinders yeXesha le-6 leNetflix kunye neNetflix ityhile iBali ekufuneka ulazi ngaphambi kokuba ubukele iPloti eNtsha, okulindelweyo
Amagqabantshintshi ohambo kunye neeKowuti eziza kubangela ukuba iWanderlust ikuwe
ngumzingeli x umzingeli anime ngaphezulu
ixesha lokufa elifileyo
uthando ft umtshato noqhawulo mtshato
isizini 2 akukho umdlalo akukho ubomi
12 episode anime ukuthandana